TTSweet: ပီအာ ... ပီအာ ... ဘာကြောင့်ဂျက် ...
Posted by T T Sweet at 12:07 AM
ဆူးသစ် December 10, 2010 at 1:16 AM
PR လျှောက်ဖို့တောင် စိတ်ပျက်မိပါတယ် ကျွန်တော့်စီနီယာ အစ်ကို၊ အစ်မများ ခင်ဗျား.....ဒီလိုနဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ရဦးမှာပေါ့လေ။
Anonymous December 10, 2010 at 3:06 AM
ပီအာဖြစ်ရင် အခွန်နဲ့စီပီ အက်ပေးနေရအုန်းမယ်
မြူးမြူး December 10, 2010 at 10:26 AM
၂ခါဂျက်ပြီးသကာလ စိတ်ပျက်သွားပြီ.. လျှောက်တော့ဘူး.. စိတ်နာတယ်..
Thandar Lwin December 10, 2010 at 12:01 PM
မမဆွိေ၇ ကျမ တို့ချောက်ဂျီတီအိုင် ဘလော့မှာ ကူးတင်ခွင့်ပြုပါလို့။ အမ၇ဲ့ လင့်လေးပါ ထဲ့တားပါတယ်။
mgchaint December 10, 2010 at 12:08 PM
ဆွိရဲ့ ကိုယ်စား ကျွန်တော် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ တင်ခွင့်ပေးပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်အမြင်ကိုပဲ ရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက် မှားတယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်လွတ်ကြပါ။
စကားမစပ် တင်လိုက်ပြီ မဟုတ်လား။
Rita December 10, 2010 at 12:12 PM
Rita December 10, 2010 at 12:15 PM
Most of the scholarship have terms to go back & serve your native country after studies. That's may be the main reasion for his PR rejecting.
Raymond.Kyaw Minn Naing December 10, 2010 at 12:36 PM
အော်.... ဂလိုကိုး..။ ပီအာရီဂျက် တစ်ခါမိဖူးပြီးသားမို့ ကြားရတာကလဲ အားရစရာမရှိတာမို့.. ဒုတိယအကြိမ်ကို ရက်အကန့်သန့်မရှိ နောက်ရွှေ့လိုက်ပါပြီဗျာ။ ပို့စ် အတွက်ကျေးဇူးပါ။
T T Sweet December 10, 2010 at 12:54 PM
အပေါ်က အနောနိမတ်စ် ပြောတာလဲ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ စကောလာတွေက တိုင်းပြည်ပြန်ပြီး အလုပ်အကျွေးပြန်ပြုဖို့ဆိုတာ ပြောပါတယ်။ ဦးခြိမ့်က သူ့အမြင်ကိုပဲ ရေးထားတာပါ။
Thandar Lwin December 10, 2010 at 4:09 PM
ဟုတ် ဦးခြိမ့် ခွင့်ပြုမယ်ထင်လို့တင်လိုကါပါတယ် ဟီးဟီး ။
မမဆွိ စကောလာတွေက တိုင်းပြည်ပြန်ပြီး အလုပ်အကျွေးပြန်ပြုဖို့ဆို တော့ အဲဒီ စကောလာ က ဘယ်ကပေးတာလဲဟင် ။ စ ကပေးတာလို့ထင်ထားတာ။
ဦးခြိမ့်ကြီးကစင်ကာပူပီအာပစ်ပြီး အောင်စီကိုဒါကြောင့်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတာကို ........
mgchaint December 10, 2010 at 4:46 PM
မသန္တာလွင် ခင်ဗျာ။ အဲဒီချာတိတ်ကို စင်္ကာပူအစိုးရက စကော်လားရှစ်ပေးတာပါ။ သူစကော်လားရှစ် ရတုန်းက မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရမယ်ဆိုတာ လက်မှတ်မထိုးထားပါဘူး။ မည်သည့်ကန်သတ်ချက်မှ မပါဝင်ပဲ အရှေ့တောင်အာရှ တိုးတက်ရေးအတွက် ပေးတာပါ ခင်ဗျာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လက အဲဒီချာတိတ် လ၀က ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ အသနားခံစာ ပြန်တင်လိုက်ပါ။ ကျောင်းတွေမှာ ထူးချွန်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေရှိရင်လဲ တင်လိုက်ပါလို့ ပြောပါသတဲ့။ အခုတော့ အသနားခံစာ တင်ထားတာ တစ်လကျော်နေပြီ ဘာမှ မသိသေးလို့ စောင့်နေတုန်းပါ။
1) NUS အဆောင်တွေမှာ ဟောကျူတာ အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်။
As far as I know, there is no Hall Tutor for Hostels in NUS University. I guess you are refering to Hall Tutor for NUS High School. NUS High School recruits A-level students as hall tutors if their O-level result is good. (There areafew myanmar students working there as Hall Tutors.)
2) There are other reasons for his PR being rejected. Main reason should be the one commented by above Anonymous. Or may be becoz he was active in some Myanmar activities. (Guess you know what I mean)
3) NTU/NUS bachelor graduates (especially if you are graduated with second class upper) are (99%) granted for their PRs. Of course, you must secureaproper job before you apply PR. Please note that it doesn't apply for MSc Students.
yes i totally agree with above Anonymous.. very lucky for me, i got PR 2009 Aug..
mgchaint December 10, 2010 at 6:18 PM
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီချာတိတ် ဘယ်ထဲမှာမှ မပါဝင်ပါခင်ဗျာ။ နိုင်ငံရေးလဲ ကင်းရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာတာပါခင်ဗျာ။
မှန်တာပေါ့ဗျာ ၉၉% ကို ပီအာပေးရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီချာတိတ်က second upper class လဲ ဖြစ်တယ်။ အခုလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကလဲ တော်တော်ကြီးတယ် ကော်ပိုရေရှင်းကြီးပါ။ လခလဲ အခုမှ ကျောင်းပြီးပေမဲ့ ၃၅၀၀ ရတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဒါကို ရီဂျက်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Justacurious Q, what is the entry level salary for fresh graduate and max salary? with thanks
mgchaint December 10, 2010 at 7:17 PM
ဒီနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်ဘွဲ့ရခါစက ၂၅၀၀လောက်ပဲ ရတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာတချို့ကတော့ ၂၀၀၀-၂၅၀၀ နဲ့ လုပ်ကြတာများတယ်။ First class ဆိုရင် အလုပ်အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲံလဲ ၄၀၀၀ လောက်ကို ပေးလိုက်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ မြန်မာတွေဆိုရင်တော့ ၁၈၀၀ လောက်ပဲ ရကြတာများတယ်။
Who told you that scholars are to serve
the home or host country? NUS gives away
more than 100 research scholarships per
year for PhD and anyone can compete for
those scholarships and you can leave or
stay as you like. Yes there are types of
less competitive scholarships where the
recipient will have to compete only with
people from home countries and such and
such scholarship recipients have signed
that they will go back home country.
There are very competitive scholarships
open for anyone with right qualifications.
Luckily I (including my family) got PR 2009 Sept.
Anonymous December 10, 2010 at 11:36 PM
At the present u n ur family could say luckily got PR 2009. But u must renew it 2014.
pandora December 11, 2010 at 12:52 AM
post grad scholarship ရသူတွေ၊ poly ကျောင်းပြီးသူတွေ ပီအာ ဂျက်ခံရတာ အနီးအနားမှာ တွေ့ရတယ်။
တချို့ post grad အတန်းတွေ လာတက်ကြသူတွေက ကျောင်းပြီးရင် ပီအာ ရမလားလို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပါ။ ကျောင်းလခတွေကလည်း ဈေးကြီးလာတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေအရတော့ ပီအာရဖို့ အရင်လို မသေချာတော့ဘူးဆိုတာ နားလည်ပြီးမှ ကျောင်းတက်မတက်ကို ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
Whatabig deal for you all burmese?? Last time when they give PR easily, you all joke abt it. now, tight,so what...
No big deal to all, Anonymous.Not all burmsese want to beaSingapore PR. We can easily save money & go back to our lovely country under the statys of EP. :)
Going home is always in my mind. But there is not much different going back home country and staying here right now.
The main things is our mind. Depend on how we are keeping our mind. But money is key point and effecting our life.
One day when we getting old and save enough some money, then our home country is better than here.
Think about when you need to go hospital for some reasons, Singapore is better than home country.
ok, we can go back to myanmar at the age of 55 with million dollars of money. we can live at InnYar Road with good Bunglow. How is your children? they grown up here, graduated here, do you think they will follow you to myanmar? so how? anything happen to you, who will take care of you? unless you put your children at myanmar since now.
Educate in Singapore then migrate to Canada, Australia, and NZ. Or work in Singapore then
save money, go for graduate studies in US, UK
and Australia. Singapore is not the only place
on earth for Burmese to live and work.
I see this asapositive thing. In the past,
those Burmese who went to AIT, Bangkok for
post graduate studies are top students from
YIT and other unis in Burma. That trend had
stopped in early 2000s. Since AIT graduates
faced with grim job prospects, most tried to
get jobs in Singapore and those who find it
hard to getajob in Singapore headed to the
west and they have had to struggle there, and
some sunk, some still swimming butafew have
made it and they are doing well in US, UK,
Canada, Europe and Australia (all that nations
are better than life in Singapore unless you
have savedamillion dollars in bank account
and drawing six figure salary in Singapore.)
Hardships made one tougher and swim harder
to reach better shores. I think I would not
have left Burma if I could have gottenajob that pays me 500 to 1000 dollarsamonth.
Thinking back, although I am still swimming,
I felt that no jobs back home pushed me to
better places. So now closure of Singapore
will drive Burmese out of the city state,
so we will have better diaspora and we will
be better off in decades. All dark clouds
have silver linings in them.
ဖိုးတုတ် December 12, 2010 at 12:38 AM
စင်ကာပူ လ၀က မှာ လိုအပ်တဲ့ quota ပြည့်သွားတာဖြစ်လို. လောလောဆယ် ပီအာ ဘက်မှာ ကြပ်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို.ရဲ့ ပေါ်လစီက အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတာ အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ပီအာ လျောက်တာလွယ်ကူနိုင်ပါတယ် ၊ ခက်တာက ကျွန်တော်တို.က ဧည့်သည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အိမ်ရှင်ရဲ့ (စလုံးရဲ့ ပေါ်လစီ) ရဲ့ မူအရပဲ သွားရမယ်လို. ထင်ပါတယ် ၊ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အီးပီနဲ.နေတာ ဘာမှမသိသာလှပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူ ၊ ကလေးရှိတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ကလေးရဲ့ ပညာရေးတွေမှာ စင်ကာပူ နိုင်ငံသား ၊ ပီအာ ၊ နိုင်ငံခြားသားရယ်ဆိုပြီး subsidies တွေမှာ သိသိသာသာကြီး ကွာသွားပါတယ် ကလေးပညာရေး အတွက်တော့ မိဘတွေ ပီအာဖြစ်ရင် ပိုသက်သာပါလိမ့်မယ် ၊ လောလောဆယ် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေမှာ စင်ကာပူ ပညာရေးက အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပါတယ် ၊ အမေရိကား၊ သြဇီတို.မှာလည်း ကလေး ပညာရေးအတွက် ကောင်းတယ်လို. ပြောကြပါတယ် ၊ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဘာပဲပြောပြော စလုံးက မြန်မာပြည်နဲ.နီးပြီး အချိန်မရွေး ရန်ကုန်ကို ပြန်နိုင်လို. ပိုပြီးနှစ်သက်ပါတယ် ၊ စလုံးမှာ နေတာအချိန်ကြာလို. တစ်ခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီး အစစအရာအရာ adjust မလုပ်ချင် တော့ပါ ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေးတွေအတွက်တော့ ပီအာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်တော့ စလုံးမှာ ဈေးကြီးလှပါတယ် ၊ နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ အတွက်တော့ စလုံးက အစစအရာရာ ဈေးကြီးမူက မသိသာလှပါ၊ ကလေးရှိတဲ့သူများ ၊ ရေရှည်နေမဲ့သူများ အတွက်တော့ ပီအာရီဂျက်ဖြစ်လည်း အချိန်အနည်း ငယ်စောင့်ပြီး ထပ်မံလျောက်သင့်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက စာမေးပွဲ ခဏခဏကျ ၊ အီးပီ ရီဂျက်အကြိမ်ကြိမ် ထိခဲ့သော်လည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးပမ်းမူကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုချိန်မှာ အတော်အသင့် အဆင်ပြေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ အီးပီအကြိမ်ကြိမ် ရီဂျက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ကျွန်တော်ပီအာလျောက်တဲ့ အချိန်မှာ ၂လခွဲနဲ. approve ဖြစ်ပါတယ် ၊ တစ်ခါ တစ်လေပြောရခက်ပါတယ် ၊ ဦးခြိမ့်ရေးသလို ကျွန်တော် ရေးသားချက်ကလည်း ကျွန်တော့် အတွေ.အကြုံ နှင့် ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်၊ ခရီးသွားဖော်အချင်းချင်း အားပေးတဲ့သဘောသာဖြစ်ပြီး အမှားပါလျင် ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ ၊
Yes I agree with me and ZZZ, i would like to urge all burmese that singapore is not the only places for you all, getting EP, SPass, work permit is enough for your jump boat. save money, learn english and jump to other country...it's better... don't just close your eyes, explore the world...
"Last time when they give PR easily, you all joke abt it. now, tight,so what... "
စနေနေ့ ICAကို ကလေး birth cert သွားလုပ်တော့ ရုံးတောင်မဖွင့်သေးဘူး အပြင်ဘက်မှာတန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးက ရုံးအနောက်ဘက်ထိရောက်တယ်..ဝစီကံတွေတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ
we think that it's no value if can get easily
ရောက်ကတည်းက လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာပဲ S-pass နဲ့ နေလာတာ သုံးနှစ်ခွဲ ကျော်ပါပြီ။ အဆင်မပြေလို့ အလုပ်သစ် ပြောင်းချင်နေပါတယ်။ အမျိုးသား (Single) ပါ။ နိုင်ငံသားပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်လည်း မရှိပါ။ EP ပြောင်းလျှောက်သင့်ပါသလား ?
EPက ဘယ်လို ပိုသာတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါသလဲ ? ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေ လက်လှမ်းမီသလောက် ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
(မြန်မာသံရုံးအခွန် ဆောင်ဖို့အတွက်ကတော့ EP က ပိုဆောင်ရမယ် ထင်ပါတယ်။)
yarwanna December 25, 2010 at 4:41 PM
အခုလောလောလတ်လတ်ကြားမိတာလေးရှိလို. မှန်မမှန်သေချာချင်လို.ပါ။ အခု သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်ရင် CPF statement ကိုထုတ်ပေးရတယ်လို.ကြားပါတယ်။ ကြားမိကြလား မသိဘူး။
အဟက်... ISS (NUS) က postgrad diploma တက်တဲ့သူတွေ အရင်က တတန်းလုံး ပီအာလျှောက်ရင် တတန်းလုံး ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ SA29 ကစပြီး တတန်းလုံးရှိ မြန်မာများမှာ ၁ယောက်ပဲ ပီအာရပါတယ်။ ရီဂျက်ထိတဲ့သူတွေထဲမှာ အကုန်လုံး လစာ ၂၀၀၀ကျော်ကြတာချည်းပါပဲ။ တချို့ ၃၀၀၀လောက်ကို ရကြပါတယ်။ တရုတ်ကလူတွေ လစာလေး ၁၅၀၀ ၊၁၆၀၀ နဲ့ ပီအာ အကုန်ရသွားပါကြောင်း။
မြကလေး December 2, 2011 at 3:30 PM
ဦးခြိမ့်နဲ့ အန်တီဆွိရေ.. အခုတော့ EPEC ပါချမပေးတော့ဘူးတဲ့...
ရှိပြီးသားလူတွေလဲ LTVP ကို ၃ လပဲပေးတော့မယ်တဲ့...ဟူးးးး
ညီမက အေအိုင်တီကနေ ဒီနှစ်မှ ကျောင်းပြီးပြီလာတာပါ.. သေမဲ့နှစ်မှ စစ်ထဲဝင်မိပြီလားလို့ တောင်တွေးမိတယ်...
ဒီနှစ်ထဲတွင်လဲ မလေးတရုတ်များ လုပ်သက်၁နှစ်မပြည့်သူများပင် ပီအာရ်များရနေတယ်လို့ ကြားမိပါသည်။ Update များရှိရင်လဲ ဝေမျှကြပါအုံး။ လက်ရှိမြန်မာပြည်ကြီးအခြေအနေကလဲ၊ မျှော်တလင့်လင့်များဖြင့် ရင်ခုန်နေကြရပါကြောင်း....